Waxaa laga yaabaa in aad maqashay wax weyn oo ku saabsan DVDFab, laakiin waxaa laga yaabaa in aad leedahay nidaamka qalliinka ah in kaliya aan u taageeri karaan, ama aad si cad raadinaya dooran karta. Waxaa jira dhowr kale oo weyn oo waxaa si loogu badalo DVD aad u video qaab ka duwan in ka ciyaari karaa noocyo kala duwan oo qalab. Bal aynu eegno toban iyaga ka mid ah.
1. BDMagic u Mac
Barnaamijkan wuxuu ku yimaadaa awood u leh inay dooxi Blu-Ray cajalladaha iyo sidoo kale DVD. Waxaad nuqul ka kartaa filim macluumaadka disc buuxa, ama aad nuqulka kaliya filimka. Waxa kale oo aad loogu badalo kartaa BluRay in qaabab kala duwan computer, ku haboon ciyaaro on Qalabka telefoonada gacanta ama your computer. Barnaamijku waxa uu sidoo kale oggolaan doono in aad si loo yareeyo aad movie in ay qol yar ku saabsan qalabka la qaadi karo - mid aad u anfacaya marka aad rabto in aad u qaadato safar ah. Waxay ka shaqaysaa on OS X Leopard oo kor ku xusan.
2. ByteCopy u Mac
Qalabkani waxa uu si fiican u la shaqeeya barnaamijyada kale ee sida Blu-Ray Ripper ama qoraalkii hore ee ByteCopy. Waxad abuuri kartaa versions raad raac ah oo filimada aad ka Blu-Ray ama DVD. Nuqulo Kuwa xitaa ka mid noqon kara dhammaan calamado cutubka iyo subtitles. Waxa kale oo ay u bedeli karaan faylasha qaababka haboon kombuyuutarrada gacanta sida iPad iyo dab ugu shidin ku HD. Waxaad si toos ah dajiyaan karaa faylasha aad ka disc ah. Ilaalinteedu audio aad kuwan raadkaygay oo aan wax khasaare ah waa mid ka mid ah calaamadaha muujinaya barnaamijka. Waxaad dooran kartaa raad aad rabto inaad sii for wejiga kama dambaysta ah, sidoo kale, haddii ay jiraan qaar ka mid ah kuwan raadkaygay aadan doonayn in aad haysato.
3. iMedia Converter u Mac
Kani waa barnaamij nuqul Blu-Ray iyo DVD iyo sidoo kale Converter file video si aad u samayn kartaa nuqul raad raac ah oo filimada aad, ama iyaga loogu badalo in ay qaab kala duwan si ay u qaado ah. Waxaa jira 140 qaabab kala duwan si aad u badalo kartaa filimada aad. Waxaad dooran kartaa qaabka wax soo saarka, ama waxaad dooran kartaa qalab aad ha toos ah lagaaga caawiyo in aad doorato. Waxay kaa caawinaysaa in la ilaasho adiga video tayada aan loo eegayn waxa aad format, oo ka saari kara faylasha dheeraad ah si aad kaliya filimka haddii aad sidaa doorato. Waxa ay u qotonsaday inay la OS X Leopard ama ka shaqayn.
4. Samee MKV
Barnaamijkan waxa haboon si deg deg ah kaga dayanayaan filimada, haddii ay yihiin Blu-Ray ama DVD. Waxaa badasha oo dhan clips video iyo cajalladaha in qaab MKV ah, mid ka mid ah sababaha ay tahay si degdeg ah. Waxaad buuxin kartaa nuqul ka dhan ah filim ka yar 90 daqiiqo, waxaadna ilaalisaa oo dhan oo ka mid ah kuwan raadkaygay audio iyo subtitles jidka. Waxaad isku dayi kartaa barnaamijka muddo 30 maalmood ah si loo arko haddii aad u rabto. Qayb DVD koobiyeynta ayaa had iyo jeer sii joogi doono oo lacag la'aan ah.
5. Blu-Ray Ripper u Mac
Barnaamijka Tani waxay u ogolaaneysaa in aad si loogu badalo aad Blu-Ray filimada in qaabab in ugu wanaagsan ee qalabka la qaadi karo si aad Android yihiin. Waxa la shaqeeya Mac OS X Mountain Libaaxa iyo Mavericks. Waxay kuu ogolaanaysaa inaad nuqul ah qaab .mp4 ah in aad Android si fudud u isticmaali kartaa oo aan laga badinin badan jidka oo tayo leh. Waxa kale oo aad si qaab .mp4 badalo kartaa DVD-aad iyo sidoo kale, ama mid ka mid ah kuwa kale oo dhowr ah sida FLV ama AVI. Sida aad arki karto sawirka, waxaad dooran kartaa qaab wax soo saarka aad dhibic ka hoos menu.
Barnaamijkan waxa u fiican ee ka shaqeeya uu howlihiisa si ay nuqul DVD aad u gal your computer, si aanu wax badan oo khayraadka ma sawiri. Waxaa sidoo kale waxa uu awood u sirta gobolka code si aad filim waa playable meel kasta oo dunida. AnyDVD sidoo kale ka saari kartaa subtitles iyo furitaanka farriimaha digniinta si faylka ka yar, taas oo ku haboon ee la qaadi karo qalab kale oo badan si fudud. Waxaad dooxi karo DVD HD, Blu-Rays, iyo CD-yada audio, iyo waxa ay leedahay awood ay ku hagaajin kuwan raadkaygay ku CD jabtay inay dib ugu soo album aad ugu jeceshahay. Barnaamijkan ayaa sidoo kale qabsato kartaa xawaaraha loo maqli karo ee DVD ciyaaryahan your computer ayaa si aadan haysan buuq aad u badan ka gariirka ka.
Barnaamijkan oo lacag la'aan ah sidoo kale hawshooda waddaa ee asalka ah sida ay de-sir DVD. Barnaamijka freeware kaliya in ay sameeyaan naga liiska, waxaad u baahan kartaa inaad kala soo baxdo ka siib-in haddii aad socda Windows 8, sida version caadiga ah aan weli la casriyeeyay. Waxa uu socon doonaa on Windows 2000 mashiinada jidka oo dhan iyada oo loo marayo Windows 7. Waxaa loogu talagalay in ay si habsami ah ula shaqeeyaan barnaamijka nuqul DVD, sirta jebisay si ay u sameeyaan koobiyeynta sahlan ee. Bilow barnaamijka DVD43 aad marka hore, ka dibna aad barnaamijka nuqul DVD.
Barnaamijka waxa uu leeyahay awood u leh inay abuuraan nusqado u cajalladaha aad. Waxaa loogu talagalay in ay ka shaqeeyaan aad Mac OS X leh ama Windows XP dhex 7. Waxaa ka shaqeeya labada guriga soo saaray ama cajalladaha ganacsiga iyo dhawraa khasaaraha ugu yaraan. Waxaad ka dibna nuqul ka gubi kara in disc maran ama sii on your computer dambe la isticmaalo. Haddii aad rabto in aad nuqul buuxa ee filim oo dhan ee horyaal iyo bedeley aad karto, ama aad edit karaa oo kaliya hoos u movie ugu weyn.
Barnaamijkan nuqul ka kartaa DVD iyo sidoo kale CD ama wadada audio ka DVD ah u qaadi. Inaad ugu badan ee qaabab video badalo kartaa DVD aad loogu isticmaalo qalabka mobile aad jeceshahay, oo ay ku jiraan .mp4, FLV, iyo AAC. Iyadoo file waa on your computer, aad samayn karto qaar ka mid ah tafatirka aasaasiga ah, sidoo kale, oo loogu badalo in ay 3D la isticmaalayo mid ka mid ah lix saamaynta kala duwan, taas oo ku xidhan ciyaaryahan 3D aad leedahay. Waxayna u shaqaysaa iyadoo Windows XP ilaa 8, wuxuuna version ah tijaabo lacag la'aan ah si aad u aragto haddii aad u jeclaan. Waxaa jira version ah ayaa diyaar u ah Mac ah, sidoo kale.
Factory 10. Qaab
Barnaamijkan sameeya labada file diinta iyo DVD dooxeen. Waxaa loogu badalo karo files video iyo dvd in qaabab video caadiga ah sida wmv iyo FLV. Waxa kale oo aan samayn karo beddelaad audio iyo beddelaad hal image. Haddii aad rabto in aad ku shuban qalabka la qaadi karo aad, sidaas samayn kara in u ka iPhone / iPod Touch, Blackberry, iyo Playstation la qaadan karo. Haddii aad qabto file ah oo burburay, waxay kaa caawin kartaa in dayactirka dhaawaca, iyo in ay size ka wanaagsan ugama noqon kartaa file u qalabka la qaadi karo.
Markaasaa waxaa aad u tagto - toban kale oo si DVDFab samayn kara noocyo kala duwan oo laga badalay qaab. Qaar ka mid ah ku siin versions tijaabo si ay u fududaato in la go'aansado mid aad rabto in aad isticmaasho, had iyo jeer lagu daray ka hor inta maalgashiga software.
> Resource > DVD > Top 10 DVDFab lagu bedelan karo Beddelaan DVDs si kala duwan Qaabka Video